China SOFT PLYO IBHOKISI mveliso kunye nabathengisi | Ukuqhayisa
IIMPAHLA ZE-SOFT PLYO
Ngaba ujonge esinye seziqwenga ezifanelekileyo zokuzilolonga kwimarike? Uphendlo lwakho luyaphela kwaye ukuzilolonga kwakho okugqithisileyo kuqala ngeFEIQING Fitness 3-in-1 Ibhokisi yeGwebu yePlyometric. I-Feiqing Fitness pro-duty Foam Box Plyometric Box sisixhobo esichanekileyo osidingayo ukuze wandise ukutsiba kwebhokisi yakho, ibhokisi yokutyhala, idiphu, ukunyathela, kunye nokunye okuninzi kokuzilolonga. Yisebenzise kuqeqesho lwakho lomnqamlezo, kwigaraji yakho, okanye kwindawo yokuzivocavoca ukuze wenze umthambo we-aerobic njengangaphambili. Ukuba ukuzilolonga kuya kuba lula kwicala lama-20, jikeleza ngokulula ibhokisi ukongeza u-4 "- 10". Oku kunyanzelisa ukuba utsibe ngaphezulu kwaye utshise iikhalori ezingaphezulu ngelixa uphucula ngokuthe nkqo! Ezi bhokisi zenziwe ngogaleko oluphezulu kunye Zakhelwe ukugcina ngezo yure zide zoqeqesho lomzimba.
AKUKHO MFUNEKO WENDIBANO: Ngeli bhokisi yeplyometric, akukho ndibano ifunekayo. Yikhuphe ngaphandle kwephakheji kwaye ilungele ukuhamba ngokukhawuleza. Ngoyilo olulula kodwa olusebenzayo, lixesha lokuba uthathe ukuzilolonga kwakho kwinqanaba elilandelayo.
Ibhokisi yethu ye-plyo eyenziwe ngeplastiki yenziwe ngephepha le-PVC kunye ne-YKK uziphu, igcwaliswa ngebhokisi yeplanga kunye ne-EVA foam.we ikwanokwenza i-EPE kunye ne-foam ephezulu kakhulu, ubunzima beseti nganye bungenziwa ngokwezifiso.
-Ipro-duty firm foam / ukwakhiwa kwebhokisi yeplanga.
-Izinto ezithambileyo ziyanceda ukuthintela ukwenzakala.
- Slip umphezulu wasimahla.
- Akukho ndibano iyafuneka.
Iibhokisi ze-Foam Plyometric ziqinile ngokwaneleyo ukuba zenze intshukumo ye-plyometric, kodwa zithambe ngokwaneleyo ukuba aziyi kwenzakalisa i-shins xa uphoswa.
Ukuphakama ngokubanzi: 20-in.
Ububanzi ngokubanzi: 24-in.
Ubude obuBanzi: 30-in.
-Izinto eziphathekayo: I-PVC + IBHOKISI YOKUWODA + I-EVA FOAM OKANYE I-EPE + ugwebu oluphezulu
OKUBALULEKILEYO: Iibhokisi ze-Foam Plyo akufuneki zisetyenziswe nakweyiphi na imigangatho egudileyo (ukhuni, ikhonkrithi egudileyo, ithayile, njl.
Isiseko sebhokisi yomthi kunye ne-EVA foam ethambileyo kuwo onke amacala ama-6 agqunywe ngumsebenzi onzima we-vinyl.
Iibhokisi zinokusetyenziselwa iimbaleki ezisebenza ekuphuculeni ubunzulu be squat yazo okanye iimbaleki ezifuna itactile cue ukuze zifunde indawo ezikuyo ezantsi ngaphandle kokukhulula ngokupheleleyo ikhonkco elingasemva.
Egqithileyo Ibhola eludongeni
Okulandelayo: I-PVC slam ibhola